Recette Brochettes de coeur de boeuf aux legumes - nahandro tsotra
par Gaël RAKOTOVAO	 19 mars 2016
Ity recette manaraka ity dia azo ampanandramana izay olona tsy tia fon’omby ao amin’ny fianakaviana. Ho hitanareo eo fa ianareo indray no tsy mihinana fa ho laniny daholo ireto brochettes de coeur de boeuf ireto.
Fotoana iketrehana azy: 15mn
Fon’omby 500g (coeur de boeuf)
sel, poivre, huile, oignon
Fikarakarana brochettes de coeur de boeuf aux legumes
Esorina ny faritra matavy amin ‘ny fon’omby. Tetehina en « dé » ny nofony, avy eo, lomana ail sy gingembre sy sauce soja sy sel sy poivre sy huile.
Ampifanelanelanina eo amin ‘ny « pique a brochettes » ny fon’omby sy oignon sy poivron sy tomate dia atono amin ‘ny afo malefaka ho masaka tsara.
Ny ambin’ ny legumes dia alona kely amin ‘ny marinade avy nandomana ny fon’omby dia atono amin’ny afo malefaka koa, tsy atao masaka be.
boeuf aux legumes, brochette de boeuf, fon'omby, laoka malagasy, recette cuisine malgache
Article précédent : Beignets de Pommes
Mi-sao gasyArticle suivant :